Daabacaadda 3D - Ikkaro
Kacaankii weynaa ee xagga farsamada iyo dhaqaalaha ee qarnigan 3aad wuxuu ballanqaadayaa inuu noqonayo XNUMXD Daabacaad, farsamo wax soo saar inkasta oo aanu cusbeyn, haddana ay noqotay mid caan noqotay oo ballanqaaday inay guryaha oo dhan wada gaari doonto.
Qiyaas sida ay noqon doonto inaad awood u yeelato isla markaaba qaybaha iyo walxaha aad u baahan tahay. Mustaqbalka ayaa ah in qof walba guriga uu ku haysto daabacad daabacan oo 3D ah iyo in isdhexgalka uu yahay mid aad u fudud oo qof walba uu isticmaali karo, sida inuu yahay kumbuyuutar ama qalab kale oo guriga lagu isticmaalo. Miyaad aadi lahayd dukaanka qalabka haddii aad ku daabacan karto waxa aad ugu baahan tahay guriga? Waa halka aan ku sii jeedno.
Hada waa riyada kuwa sameeya, kuwa wax jabsada iyo kuwa jecel DIY ...
Laga soo bilaabo Ikkaro waxaan ka galnaa adduunkan xiisaha leh ee daabacaadda 3d si aan kuu baro dhammaan dhinacyada, laga bilaabo naqshadeynta qaybaha illaa iibsashada iyo isu imaatinka qalabka kala duwan ee furan ama daabacadaha qalabka bilaashka ah.
Sida had iyo jeer ah, waxaan dooneynaa inaan ku bixinno macluumaadka habka ugu faahfaahsan ee suurtogalka ah, iyadoo loo marayo hagitaanno tallaabo tallaabo ah iyo casharro iyo habka ugu badan ee la adeegsan karo.
Haddii ay tahay xiriirkii ugu horreeyay ee aad la yeelato dunida daabacaadda iyo 3D madbacadaha Midkood maxaa yeelay waa inaad mid isticmaashaa ama inaad rabtaa inaad iibsato oo aadan runti garanayn waxa ay tahay inaad eegto, waxaan kaaga tagayaa saldhigyada iyo astaamaha ugu waaweyn ee ay tahay inaad tixgeliso si aad u awoodo inaad isbarbar dhigto iyo soo ogow daabacaha aad xiiseyneyso.
source: Dib udhac
Noqo mid macquul ah maanta Daabacayaasha 3D looguma talagalin adeegsadaha dhamaadka wali, taas oo ah, dadweynaha guud. Maaha wax la mid ah qalab ama qalab kale, inaad aqoon yar ama xiiso yar aad ku isticmaali karto. Halkan waxaad u baahan tahay xoogaa aqoon ah ama ugu yaraan walaac si aad uga faa'iidaysato qalabka.